Warbixin:Soyaalka Khilaafka Madaxda Galmudug - Ceelhuur Online
Home > Uncategorized > Warbixin:Soyaalka Khilaafka Madaxda Galmudug
Warbixin:Soyaalka Khilaafka Madaxda Galmudug
November 23, 2017 Cali Yare574
Khilaafka Madaxda sare ee Maamulka Galmudug ayaa ah mid wili taagan waxaana Gaabis galay adeegyadii Maamulka ay ka sugayeen Bulshada Deeganku kuwaas oo uu Cuuryaamiyay Khilaafka Madaxwayne Xaaf oo dhinac ah iyo ku xigeenkiisa iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo dhinac ah.
Goormuu bilowday Maxuuse salka ku hayaa Khilaafku?
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Madaxwaynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) 21September 2017 ayay Galmudug k biirtay Maamul Goboleedyada ka hor yimid Go’aan kii Dhex dhexaadnimo ee Dowladda ka qaadatay Xiisadda Wadamada Khaliijka Waxaana Qoraalka si cad loogu taageeray Xulufada Sacuudiga iyo Imaaradka ayadoo Galmudug sheegatay in danaheedu ku jiraan inay Xariirka u goyso Qatar lana safato Imaaradka iyo Sacuudiga.
Maalin kadib 22 September 2017 Madaxwayne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo Gudomiyaha Baarlamaanka Cali Gacal Casir oo si wada jir ah Cadaado kulan ugu qabtay ayaa si cad uga hor yimid Hadalka kasoo baxay Madaxtooyada waxayna sheegeen in Go’aan kaasu yahay mid ugaara Madaxwayne Xaaf uusana ku ma talin Galmudug inteeda Kale waxayna hoosta ka xariiqeen in go aanada Arimaha Dibadda ay uga danbaynayaan Madaxda Dowladda Dhexe ee Soomaaliya wixii itaas ka danbeeyay Khilaafka Masuuliyiinta Galmudug ayaa noqday dab dhagax lagu dhuftay.
Madaxwayne Xaaf oo ku Maqnaa Imaaradka ayaa Cadaado kusoo laabtay 24 September 2017 waxuuna ku adkaystay tageerada Sacuudiga iyo Imaaradka asagoo Sheegay inuusan Cidna ka hibaysanayn go aanada Galmudug iyo wax uu ku Sheegay inay Qaraabanayaan halka uu Khilaafka kala dhexeeya Madaxda kale ee Galmudug ku eedeeyay Dowladda Dhexe oo uu Sheegay inay hurinayso Xiisadda Siyaasadeed ee Galmudug.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo Warbaahinta la hadlay 26 September 2017 ayaa Sheegay in Madaxwayne Xaaf uu asaga Madaxwayne ku xigeenka iyo Gudoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Xabsi guri Galiyay islamarkaana ay Naftoodu Halis ku jirto waxuuna Dowladda Dhexe iyo Beesha Caalamka ka codsaday in Arintootada lasoo Faragalsho. Cali Gacal waxuu sido maalintaas xusay in Howlihii Baarlamaanka Galmudug hakad la galiyay kadib markii loo diiday inay ku shiraan Xaruntoodii.
Isla Maalintaas 26 September tiro Xildhibaano oo ku shiray Cadaado ayaa Sheegay inay Xilkii Ka qaadeen Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaago Sheegay in Madaxwaynu jabiyaay Qodobo ka mida Dastuurka Galmudug Mudayaasha ku Shiray Hotel Mansuur ayaa markii hore doortay Gudoon Baarlamaan oo KMG ah.Saacado kadib tiro kale oo ka mida Baarlamaanka Galmudug kuna Shiray Madaxtooyada ayaa markooda Xilka ka qaaday Madaxwayne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka. Labada garab ayaa mid kastaasi soo dhaweeyay Xilka qaadista lagu sameeyay dhinaca kale.
27 September Xildhibaano ka tirsan Golayaasha Baarlamaanka Somalia kana soo jeeda Deegaanada Galmudug oo uu hugaaminayo Gudoomiye ku xigeenka 1ad ee Aqalka Sare Abshir Bukhaari ayaa Cadaado gaaray si ay Xiisadda Galmudug u qaboojiyaan. kadib kulamo ay la qaateen Labada dhinac iyo Odayaasha Dhaqanka ayay 28 September ku dhawaaqeen inay ku guul daraysteen Xal u helida Khilaafka Madaxda Maamulka ay matalaan waxayna eeda Guuldarada dusha uga tuureen Dowladda Dhexe oo sheegeen inay la Safantahay garabka Madaxwayne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Madaxwayne Xaaf ayaa 28 September ayaa Xayiraad kusoo rogay Garoonka diyaaraha Cadaado waxuuna ka maamnuucay Dulimaadyada ka imanaya Muqdisho marka laga Amisom iyo iyo Hay’adaha Caalamiga ah.Tilaabadan ayuu Madaxwaynuhu uga hortaayay Xildhibaano taageersana ku xigeenkiisa iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo doonayaya inay Cadaado gaaraan.Arinta ayaa noqotay Midi midi ku taag Madaxwayne ku xigeegka Galmudug ayaa markiisa soo Saaray Wareegto uu ku sheegayo inaysan Cadaado iyo dhamaan Garoomada Galmudug ka xirnayn Dulimaadyada Muqdisho waxuuna sheegay in Shacabka loo turo.
Madaxwaynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) ayaa 1 October Xaalad deg deg ah oo soconaysa 3 Bil kusoo rogay Dhamaan Deegaanada Galmudug waxuuna sheegay in looga hortaagayo dad wada duminta Maamulkiisa iyo Xasilooni daro ka dhacda deegaanka.
Maxkamadda sare ee Galmudug ayaa 3 October 2017 ayiday Xilka qaadista Xaaf Gudoomiyaha Maxkamadda ee Maamulkaas Yaxye Sheikh Cali oo Cadaado Warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in wado Sharci ah lagu diray Madaxwayne Xaaf.Arinta yaabka lahayd ayaa ah in Gudoomiyihu Cadaado iska baxay marku sidaas shaaciyay.Madaxwaynaha Galmudug ayaase Hadalka Yaxye Sheikh Cali wax kama jiraan ku tilmaamay waxuuna sheegay in Galmudug aysan lahayn Maxkamad sare oo shaqaysa
Ciidamo ka amar qaadanayay Madaxwayne Xaaf ayaa 9 October 2017 Xabsiga u taxaabay Ganacsade Liiban Shuluq oo lagu tuhmayay inuu ahaa ninka lasoo marinayay lacagta lagu ridayay Xaaf Ducaale.
Guddi ay iska Xuleen Baarlamaankii Sheegay inay Xilka ka qaaadeen Madaxwayne Xaaf oo lagu Sheegay Guddiga Doorashada Madaxwaynaha ayaa 11 October 2017 soo saaray Jadwalka Doorashada waxayna sheegay in ay 25 October dooranayaan qofkii badali lahaaa Mr:Xaaf.balse Odayaasha Dhaqanka Cadaado ayaa kal hore u sheegay labada garab in aan Magaalada lagu qaban karin wax Doorasho ah Laguna Kala baxo Dastuurka Maamulka.
Hugaamiyaasha Maamulada oo Kismaayo ku shiray ayaa 11 October 2017 ku baaqay in Khilaafka Galmudug lagu dhameeyo wadahadal ayagoo ka hor kulankooda Dowladda ku eedeeayay inay gadaal ka riixayso Khilaafka Madaxda Galmudug.
Madaxwayne Xaaf oo Cadaado ku laabatay 13 October 2017 kana soo labatay Shirkii Kismaayo ayaa markale Dowladda Somalia ku eedeeyay Mushkiladda Siyaasadeed ee Maamulkiisa waxuuna sheegay in Magaalada Cadaado ay ku jiraan wax uu ugu yeeray Masaas iyo Halaqyo Nabadda deeganka lid ku ah.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug iyo Madaxwayne ku xigeenka ayaa Dacwad ka dhan Madaxwayne Xaaf iyo Gudoomiye ku xigeenka 1ad ee Baarlamaanka Xareed Cali Xareed gaarsiyay Maxkamadda sare ee Dowladda Dhexe . base Xaaf ayaa 19 October waraaq kale u diray Maxkamadda asagoo sheegay in hadii la qaadadyo Dacwadaas ay u taalo Maxkamadda sare ee Galmudug
Maxkamadda sare ee Qaranka ayaa 24 October Xaaf iyo Xareed u qabatay inay Dhagaysiga Dacwada yimaadaan 25 October balse maalintii la filayay in Dacwadu furanto ayay Maxkamadsu soo saartay amar ay dib uvu dhigayso Dacwada mana aysan soo sheegin mudo kale. 22 October Madaxwaynaha Somalia ayaa Muqdisho ugu yeeray Dhamaan Hugaamiyaasha Maamulada si looga arin sado Madmadowga Siyaasadeed ee ka dhexjiray Dowladda Dhexe iyo Maamul Goboleedyada Xaaf oo xubnaha la casuumay ka mid ahaa ayaa 27 October sheegay in inta Maamulkiisa la duminayo aysan Suuragal ahayn inu ka qayb galo Shirkii Muqdisho.
Madaxwaynaha Somalia oo Dowladdiisa lagu eedaynayay Khilaafka Madaxda Galmudug ayaa 28 October yeeray Masuuliyiinta Maamulkaas Madaxwayne Xaaf oo ka qayb galayay Shirki Maamulada iyo Dowladda ayaa Muqdisho soo gaaray 28 October halka Madaxwayne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha markii ugu horaysay gaareen Muqdisho taniyo bilowgii Khilaafka.
Madaxwayne Farmaajo ayaa 1 November kulan la qaatay Madaxwayne ku xigeenka Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa labad si uu xal ugu helo Khilaafka dheerayday ee Madaxda Galmudug waxa uu sido kale kulan la qaatay Madaxwayne Xaaf.
Miyuu dhamaaday Khilaafka Madaxda Maamulka Galmudug?
Madaxwaynaha Galnudug Axmed Geelle Xaaf ayaa 16 November mar uu Muqdisho kula kulmay Odayaal ka soo jeeda Galnudug sheegay inuusan dhamaan Khilaafkii Galnudug balse ay Xalka arintaas la wareegtay Dowladda dhexe hadalkaas wixii ka danbeeyay majiro Heshiis muuqda oo la dhax dhigay Masuuliyiinta Galnudug. sadexda nin ee Maamulka ugu saraysa ayaana Muqdisho kuwada sugan oo ka wada maqan Deegaanka taas oo gaabis galisay Howlihii Maamulka.
Sawirro: RW Kheyr oo xalay kulan la qaatay Bulshada Baydhabo
Wararkii ugu dambeeyay Dagaalkii Gaalkacyo iyo Qasaaraha
Daawo Video: Dugsiga kaliya ee gabdho Macalimiin & Maamule ka yihiin (Cadaado)